> Resource> Video> Olee otú Mee a Wedding Montage na Photo na Video
A pụtara Foto agbamakwụkwọ Montage ga-echeta ụbọchị ahụ ị ga-echefu. Na i nwere ike mgbe were otú mfe ọ bụ na-eme ka a Montage video onwe gị, ọ bụrụ na ị na-enwe ezi inyeaka dị ka Wondershare Fantashow. Ọ na-enye dị iche iche pụtara nkiri ịke nke ị nwere ike mfe na creatively-eme ka a agbamakwụkwọ video Montage na photos, videos na music. Ị ga-nwere otutu nhọrọ ịzọpụta gị agbamakwụkwọ video Montage, dị ka ọkụ na-DVD, zọpụta dị ka iPad video, ozugbo ịkọrọ na YouTube na ndị ọzọ. Dị nnọọ eso nke a nkuzi n'okpuru na-eme ka gị onwe gị na video Montage n'ime ole na ole clicks.
1 Họrọ Your Favorite Movie Style
Mgbe echichi nke Montage onye, ​​banye ma nanị na-amalite site ị na-ahọrọ fim ịke. Ị ga-ahụ ọtụtụ narị nkiri ekwekọghị categorized site idaha. Buru ọkacha mmasị gị na onye na pịa "Mee" na-amalite na-eme gị agbamakwụkwọ Montage.
2 mbubata gị Wedding Photo / Video Files
Mgbe importing foto ma ọ bụ obere vidiyo, gaa na "hazie" taabụ. Nanị ịdọrọ na dobe ịgbakwunye gị foto ma ọ bụ vidiyo ka storyboard. Ma ọ bụ mbubata a Photo / Video nchekwa na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ndị photos mkpa edezi, nnọọ abụọ pịa dezie ha na mmapụta elu window. Ka ihe atụ, i nwere ike itinye onye nke nyo mmetụta ka a foto na-eme ka ọ na anya na-eche dị ka ndị ọzọ kpochapụwo.
3 Tinye Music, Texts, Intro / Ebe E Si Nweta
Mgbe ahụ, tinye a mpempe music site na ịpị "Tinye Music". Na ga-mma mmetụta nke gị video Montage. Ihe bụ ihe ọzọ, ị pụrụ ọbụna dekọọ na tinye gị onwe gị olu site na-atụ ka lekwasịrị faịlụ na ịpị "Record" akara ngosi na-agwa akụkọ site onwe gị. Mgbe ahụ, tinye odide na Intro / Ebe E Si Nweta ka zuo ezu nke video Montage na-eme ka uche na isiokwu.
Mgbe ọ gụchara foto Montage, gaa na "Export" taabụ, na mgbe ahụ họrọ otu nhọrọ mmepụta. Ka ihe atụ, i nwere ike kpọọ ya ọkụ ka DVD, òkè na YouTube, ma ọ bụ Chekwa na Computer. Ọ bụrụ na ị chọrọ ile foto Montage na mobile ngwaọrụ, nanị pịa "Ngwaọrụ" na akara ngosi na kachasị profaịlụ na-nyere.
Gịnị bụ More: Wedding Photo Montage Ideas
A agbamakwụkwọ video Montage pụtara na otutu. Mgbe ị na-ekiri ya ọzọ, na-echeta na-chetaghachiri na ajirija anya mmiri si. Ebe a bụ ụfọdụ Foto agbamakwụkwọ Montage echiche n'ihi na ị na-agbalị.
Kewaa agbamakwụkwọ gị Montage n'ime ọtụtụ isi ihe atụ,-alụ nwanyị ọhụrụ na-eto eto, na-alụ ọhụrụ si na-eto eto, na-ada ịhụnanya, amaghị, ogologo okpomọkụ ezumike, wdg
Họrọ mmasị photos. Foto ọ bụla ga-enweta obi nzaghachi, ma na-eme na-ege ntị achị ọchị ma ọ na-atọ ụtọ.
Adabara agbamakwụkwọ Montage songs na-eme ka agbamakwụkwọ album mmetụta uche.
Tinye mezuo iwu (Ken-Burns Mmetụta). Dị iche iche si ngosi mmịfe, agbamakwụkwọ Montage kwesịrị ọzọ mezuo iwu na-ewetara gị ka foto agbamakwụkwọ ndụ.
Mkpa utu aha / Ebe e si nweta maka photos. Site n'ime otú ahụ, tinye ihe fun ma ọ bụ romance gị agbamakwụkwọ Montage.
Ụjọ banyere gị agbamakwụkwọ mbụ-agba egwu? Malite gị agbamakwụkwọ video Montage tupu ịgba egwú. Nke a ga-mgbali anya, n'ihi na ọtụtụ ọbịa na-e-ekiri agbamakwụkwọ gị video. (OK, ọ dịkarịa ala ị na-eche otú).
Họrọ agbamakwụkwọ gị video Montage onye ma ọ bụ chọọ maka agbamakwụkwọ Montage na-eweta ọrụ na internet.
Họrọ Right Video ngosi mmịfe Onye kere: Mee Video si Photos
Olee otú Record Computer ihuenyo na bulite ka YouTube